Apple Tree "Florin": incazelo emfushane izimo isitshalo ezikhulayo
Apple Tree "Florina" ingenye ethandwa kakhulu izinhlobonhlobo apula balimi eziningi. ithandwa kangaka kungenxa fruiting njalo, isivuno esihle, ukumelana nezifo iphunga ekhethekile izithelo.
Apple Tree "Florin": incazelo
Lesi simila kuyinto efanelekayo okhulayo kokubili ukushisa, futhi isimo sezulu sifudumele. Uma udinga ezihlukahlukene izithelo fresh elondoloza sikhatsi lesingaba tinyanga letisitfupha - kungcono apula "Florina". Thola izici apula:
ukuphakama isilinganiso (hhayi ngaphansi kuka 1.8 m);
izithelo umbala - ophuzi, othi awube abomvu;
apula esikhulu naphakathi emise, quin;
ezinhle ukubekezelelana kwesomiso;
isilinganiso hardiness ebusika.
Izinhlobonhlobo oshiwo ngenhla apula, owethulwa eFrance, abavuthiwe kwesikhathi.
Inzuzo enkulu "Florina" apula: has a amasosha omzimba enamandla ezifweni ezihlukahlukene, ezifana powdery isikhutha kanye utwayi. Ngakho-ke, lo ezihlukahlukene zithandwa kakhulu balimi eziningi. Indlela enhle mzimba zingakwazi kakhulu ukunciphisa izindleko zokukhiqiza, ngoba akudingeki ukuchitha imali izindlela ezikhethekile yokulwa izinambuzane.
Kuyini uhlobo olukhethekile "Florina" apula?
Ngenxa izici zayo esihle, lezi apula zihlukaniswa kusuka nezinye izinhlobo. Yini edonsela uhlobo "Florina"? Apple isihlahla, okuyinto lihlotshiswe encyclopedia isithombe ukulima, has a, izithelo elimnandi kakhulu futhi ebukekayo amnandi.
apula isisindo ezingekho ngaphansi kuka-150 g., they possess uginindela alube ogqamile, ukunambitheka omuncu-sweet. Kulezi ithenda izithelo ikhasi, hhayi kanzima. Abanye abalimi zithi ukunambitheka kanye nephunga elimnandi apula "Florina" sifana ikhabe.
Apple Tree "Florin": ukunakekela izitshalo
Lokhu ezihlukahlukene apula ayidingi ukunakekelwa okukhethekile, kodwa namanje kancane ukunakwa ayekufuna kungadingeka akhokhe. izithombo Young abatshalwé ubukhulu imbobo 60 * 100 cm, ngobuningi bazithela.
Ukuze umuthi wawubukeka amelana emoyeni emzungezile hammer isikhonkwane embopha a kwakunezigqiki ezithambile. Apple Tree "Florina" akakubekezeleli nenhlabathi azibukhali.
Entwasahlobo udinga Zikhipha inhlabathi eduze kwemithi kancane feed yayo. Ngo ihlobo noma ekwindla idingekile ukuze ziba ngcono phansi nokuhlanza amahlamvu awile. Lokhu kwenziwa ukuze kuqinisekiswe ukugeleza oxygen uhlelo esihlahleni.
Ukuvundiswa: apula "Florin" ukhetha nitrogen umquba (ammonium nitrate noma ammonium sulfate). Kumelwe sikhumbule ukuthi ekwindla ukondla isitshalo akuvunyelwe nakancane, njengoba nitrogen kunciphisa frost.
Ehlobo ezomile futhi ezishisayo kakhulu ngobuningi bazithela isitshalo ndaba. Kwezinye izimo, imibukiso kanye ukuthambisa engeziwe.
Kufanele kuqashelwe ukuthi igatsha esihlahleni kumele kube isikhathi emuva, njengoba esikhathini fruiting, bacabangela eziningi.
Ilungiselela nezitshalo ebusika
Nothile Kuveza apula "Florina" sincike kuyo indlela ebusika.
Abalimi bathi zilungele ukutshala ebusika udinga ukunamathela ngokucophelela izincomo neskolkolkih elula:
uhlelo Basal izitshalo kubalulekile ukukhoselisa namahlamvu awile. Lokhu kuzokwenza ukuvikela ukhuni yesithwathwa ezinzima.
Isiqu apula ovbyazat prickly amagatsha fir noma ekukuzibeni it ngomcako. Lokhu kuzokwenza ukuvikela ukhuni namagundane.
Ngomcako kubalulekile ukuba afeze ngaphambi frost. Kuyaphawuleka ukuthi entwasahlobo ka lime namanje ilahlekelwa impahla yayo, ukuze ukwazi ukusebenzisa ekhethekile ukucutshungulwa amakhemikhali izixazululo namagundane. Ungasebenzisa nabo kulo lonke ebusika kanye entwasahlobo nezikhathi ngaphandle komkhawulo. Ezingenhla uyoba nesandla ekulondolozeni ubuhle nempilo izihlahla futhi amnike ithuba ngidlulise nobusika kahle futhi ngaphandle izinkinga.
Ngokunakekela apula efanele "Florina 'uyokubuyisela isivuno esihle elimnandi izithelo namanzi iminyaka eminingi ezayo.
IsiShayina iklabishi Pak choi: ukutshalwa kanye nokugcinwa izici, izakhiwo ewusizo kanye zokupheka
Amazwi amaningi uhlakaniphile nokuthi zisho ukuthini
Indlela ukunqinda ikhasi ezimweni ezahlukene?